crossorigin="anonymous"> crossorigin="anonymous"> Magaalooyinka ugu halista badan qaaradda Afrika | HimiloNetwork
Magaalooyinka ugu halista badan qaaradda Afrika
Posted by: Zakariya in Wararka April 6, 2016	0 475 Views
Muqdisho, Soomaaliya (HIMILONEWS) – Halka qaaradda Afrika isku fureyso dacallada fursadaha dhaqaale iyo xarumo dalxiiseedka ay gaarka ku tahay, tira kamid ah magaalooyinkeeda waaweyn waxay sidoo kale u tirsamaan ubucda danbiyada ama gaboodfallada. Waxaa intaas dheer, gudaha wadamada qaar, sida Koofurta Afrika (Halkaas oo midab-takoorkii muddo ka jiray intii u dhaxeysay 1948-1994) ay wali u gacan-togaaleysanayso namuunkii takoorka iyo fad-qalalooyin qalalaaso wata.
Tirinta tirooyinka danbiyada ah ee dhaca, mareegta Numbeo.com waxay is-barbardhig ku saleysan heerarka soo laablaabta ee danbiyada, badqabka, sharciga iyo kala danbeynta, ay hadaba soo saartay kala horreynta magaalooyinka ugu halista badan Afrika.
Cimil-galistan ay mareegtu sameysay ayay ku jaangoysay heerka dareen-qab ee dadku ka heystaan magaalada ay ku nool yihiin sida nabad ku socdaalka, ka cabsiga dhaca iyo boobka, dhiifanida amni, baqa-cararka ku yimaada waxyeeleynta, jid marista caay iyo bahdilid la’aan, cunsuriyeynta, dabaqis la’aanta xurnimada diimeed iyo wixii lamid ah.
Heerka kala horreysiin ee magaalooyinka ugu halista badan Afrika waxaa laga soo hubsaday hey’adda latalinta amniga dunida ka baxsan Maraykanka ee OSAC, iyada oo ka eegeysa dhinaca fal-danbiyeedyada.
Halkan waxaan kusoo ban-dhigaynaa 10-ka magaalooyin ee ugu halista badan, amni ahaan, gudaha qaaradda hodanka ah ee Afrika:
Rustenburg, South Africa: waa magaalada ugu halista badan Afrika. Sanadkii ina dhaafay oo kaliya waxaa laga diiwaan-geliyey 11,117 fal-danbiyeedyo ah. 85.71 oo kamid ah 100-kii danbi ayaa sidii la rabo loo fuliyaa. Dhaca noocyadiisa kala duwan iyo qalalaasooyinka siyaasadeed waa danbiyada si joogtada ah ugu dhaca magaaladan.
Pietermaritzburg, South Africa: Dhacdooyinka dilalka iyo dhaca ah waxay halkan ka joogaan meel sare. Saddexdii sano ee ugu danbeysey tirada fal-danbiyeedyadu waxay u kordheen si la xusi karo.
Benghazi, Libya: Taniyo dhicistii xukuumadda Ghadafi, Libiya waxay mijaha la gashay dhibaatooyin kala duwan. Amaankuna wuxuu gacmaha u galay maleeshiyo. Benghazi waxaa lagu xusuustaa in safaaradda Maraykanka lasoo weeraray sanadkii 2012–halkaas oo safiirkii Maraykanka iyo afar kale lagu dilay.
Johannesburg, South Africa: Waa magaaladani ugu weyn dalka Koofur Afrika. Waxaa ku nool 4 malyuun oo qof oo Soomaali badan ay kamid tahay. Tirada fal-danbiyeedyo ee ka dhacana mayara. Tirada kiisas badan ee ku lugta leh kufsiga awgeed, waxaa magaaladani lagu magacaabay caasimaddii Kufsiga.
Durban, South Africa: Waa magaalo xeebeed ku caan ah dalxiiska oo sanad kasta ay yimaadaan kumaakun oo dalxiisayaal ah. Waxaa la yaab leh, heerka amni-daro ee badi magaalooyinka dalkan ka jira awgeed, way adag tahay in dalxiise isku kaligiis iska socdaalo ama uu xittaa ku socdo gaarigiisa.
Lagos, Nigeria: Tira lagu sheego 21 malyuun oo qof oo ku nool magaaladan, Lagos waa magaalada ugu weyn dalka Nigeria. Heerka fal-danbiyeedyaduna aad bay u sarreeyaan. Tuugo hubeysan ayaa dhaca ku fuliya barri ama biyo sida webi iyaga oo xittaa dooman ku qowleysta.
Cape Town, South Africa: Waa magaalo-xeebeed kale oo ay ku nool yihiin tira badan oo Soomaali ah halkaas oo heerarka fal-danbiyeedku ay kordhaan.
Port Elizabeth, South Africa: Waa magaalo-xeebeed kale oo soo jiidata tira badan oo dalxiisayaal ah. Waa magaalo taariikh hida-dhaqaneed leh kana mid ah magaalooyinkii uu maray badmareenkii reer Portuguese ee Vasco de Gama.
Luanda, Angola: Waa caasimad. Heerka fal-danbiyeedyaduna aad bay u sarreysaa halkaas dhaca nuucyadiisa kala duwan lagu arko kaas oo u badan meelaha ay ku badan yihiin dadka shisheeyaha ah. Waana mid aad loogu baqo dalxiisayaasha. Waxaana lagula taliyaa inaysan lacago kala bixin meelaha ATM-yada ah ee jidadka ku ag-yaalla.
Nairobi, Kenya: Waa isha dhaqaale ee dalka Kenya. Halkaas oo sidoo kale tira badan oo Soomaali ah ay ku ganacsadaan. Waxay soo jiidataa indhaha shisheeyaha iyo maal-gashadayaasha, hayeeshe, waxay u nugushahay fal-danbiyeedyada. Dhaca jaadadkiisa kala duwan ayaa lagu falaa gudaheeda. Waxaa intaas dheer, waa magaalo bartil-maameed u ah kooxaha mayalka adag halkaas oo marar qoryo waaweyn la isku weeraro.
Previous: Sedexda daqiiqo ee nolosha Aadanaha ugu halista badan maalinkii–Qalinkii C/laahi Jafan-jeef
Next: Haweeney musqul ku dhex-taal maktabad ku xayirneyd muddo laba maalmood ah!!
Jidadka Muqdisho: Dhisanaye, maan dhowraarsanno?!`